Apple ရဲ့ Developer Conference (WWDC 2020) မှာ ဘာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားခ – unique.com.mm
Thanks for visiting us. Our website is still under construction and adding more and more products daily. Sorry for your inconvenience.
Air Purifier (လေသန့်စင်စက်)
All categories All categories10000mAh Power Bank3 Pin Adapter3 to2pin AdapterAir ConditionerAir CoolerAir FryerAir Pods ProAir PurifierAir Vent Magnetic Phone MountAirpods 2Apple 5W USB Power AdapterApple Magic Mouse 2Beverage CoolerBlenderBluetooth KeyboardBluetooth SpeakerBox Fan With HumidifierCar ChargerCar HolderCar Mount HolderChargerCharging AdapterChest FreezerChopperClothes DryerCoffee MakerDeep FryerDehumidifierDishwasherDrawing TabletDual USB Universal AddapterEarPhoneEarpods with Lighting ConnectorElectric Air PotElectric GrillElectric KettleElectric OvenExternal Hard DiskExternal SSDFacial Ionic SteamerFast ChargerFly & Mosquito KillerFly KillerFood ProcessorFreezerFry PanGas StoveGoProHair ClipperHair DryerHair StylerHeadphoneHome TheaterHumidifier Stand FaniMacInduction CookerINFRA CookerInfrared CookerInfrared ThermometeriPad Pro Smart KeyboardiPhone3Pin Original AdapteriPhone Original AdapterIronJuicerLighting USB Charger SetLightning Cable and ChargerLightning Faster Charger SetLightning USB ChargerLightning Wall Charger SetMacbookMi BoxMicro Charger & Cable SetsMicro Faster Charger SetMicrowaveMicrowave OvenMicrowave With GrillMidea Vertical Disinfecting CabinetMist FanMixerMosquito KillerMulti CookerNotebookOvenPanPortable Air ConditionerPower BankPower Delivery ChargerPressure CookerQuick ChargerRefrigeratorRice CookerRunning PadSandwich MakerShaverSmart BandSmart PhoneSmart WatchSmartphoneSony AudioSound BarSpeakerStand FanStraightenerSuki PotTable FanTable GrillTea Tray SetToasterTouch PenTower FanTravel AdapterTravel ChargerTravel USB ChargerTVType C AdapterType C Cable and ChargerType C ChargerType C Faster Charger SetType C PD Power AdapterType C USB ChargerType-C Car ChargerType-C ChargingUniversal ChargeUSB ChargerUSB ChargingUSB Multi AdapterVacuum CleanerWall ChargerWall FanWashing MachineWater DispenserWireless ChargerWireless Fast ChargerWireless SpeakerWorld Travel Adapter
Apple ရဲ့ Developer Conference (WWDC 2020) မှာ ဘာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားခဲ့လဲ...❓❓
UNiQUE Online Sales Jun 25, 2020
အခု Covid ကာလမှာ WWDC 2020 ကိုတက်ရောက်တဲ့သူတွေမပါပဲနဲ့ အိမ်ကနေပဲတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရအောင် Live Streaming ပုံစံမျိုးပဲလုပ်ပေးသွားပါတယ်။ ဒီနှစ် WWDC မှာတော့ Apple ရဲ့ Product အသစ်တွေကို ဘာမှပြောသွားတာမျိုးမရှိပဲနဲ့ Apple ရဲ့ Software ပိုင်းတွေကိုပဲ အသားပေးပြီးကြေညာပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကြေညာပေးသွားခဲ့တာတွေကတော့ 👇
👉ဒီနှစ် WWDC မှာကတော့ iOS Version အသစ်ဖြစ်တဲ့ iOS 14 ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ ပွဲဦးထွက်ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်...
အခုထွက်လာမယ့် iOS 14 မှာတော့ အရင်က ထွက်ခဲ့တဲ့ iOS Version တွေထက်ကို Theme တစ်ခုပုံစံအနေနဲ့ အမြင်ပိုဆန်းအောင်လုပ်ထားပေးတာကိုတွေ့ရတယ်။ iOS 14 ရဲ့ Features တွေအနေနဲ့ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်…
App Library – App Library ဆိုပေမဲ့လည်း App Drawer ပုံစံမျိုးပဲ…
ကိုယ်က Application တစ်ခုသုံးချင်လို့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် လွယ်ကူအောင် App တွေကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်း Suggestion, recently added, Social စသဖြင့် Categories ခွဲတာ၊ စုထားတာမျိုးတွေကို အလိုအလျောက်လုပ်ပေးပါတယ်။
Customizable Widgets - အခုဒီ iOS 14 မှာ Widgets တွေကိုအရင် iOS တွေတုန်းကလို Page တစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ပဲ Home screen ပေါ်ကိုရွှေ့ပြီးတင်ထားလို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်နေ့တာအချိန်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး Widgets တွေကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းအောင် Smart stack widget ဆိုပြီးလည်း Widgets နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Features တစ်ခုပါပါသေးတယ်။
Jiggle Mode – Application တွေတင်ထားတဲ့ Page တွေများနေမယ် ဆိုရင် Page တွေကိုစီစဉ်တာနဲ့ ကိုယ်မမြင်ချင်တဲ့ Page တွေကိုဖျောက်ထားတာတွေလုပ်လို့ရအောင် Jiggle mode ကနေလုပ်လို့ရပါတယ်။
Picture in Picture Video Support - ကိုယ်က Video ကြည့်နေရင်းနဲ့တစ်ခြားလုပ်စရာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်လည်း Video ကိုပိတ်စရာမလိုပဲ (၂) ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Video ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကိုယ်က မှတ်စရာတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဆိုရင် Video ကြည့်ရင်းတန်းလန်း Notes ကိုဖွင့်ပြီးမှတ်လို့ ရပါတယ်။
Siri – Siri က အရင် iOS တွေတုန်းကလို Full screen interface အနေနဲ့မဟုတ်တော့ပဲ Screen အောက်ဘက်အခြမ်းမှာ နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲယူပါတော့တယ်။ ရလာတဲ့ Results တွေကိုလည်း Noti ပုံစံအဖြစ်နဲ့ပဲဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Translate App - ဘာသာစကား (၁၁) မျိုးကို Internet မလိုပဲ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
App clips – Install မလုပ်ရသေးတဲ့ Apps တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုယူသုံးလို့ရတဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -ကော်ဖီဆိုင်မှာငွေရှင်းဖို့ ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ Application ကို Install မလုပ်ပဲနဲ့ Apple Pay payment အတွက် အဲသည် App ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Messaging App – Messaging app နဲ့ပတ်သတ်ပြီးလည်း Conversation တွေကို အပေါ်ဆုံးရောက်အောင် Pin လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ Group Chat တွေအတွက် Inline Replies ဆိုတဲ့ Feature လည်းပါပါသေးတယ်။ Animoji တွေလည်းတော်တော်များများစုံစုံလင်လင်ကို တိုးပြီးထည့်ပေးထားတယ်။
Default apps settings for email and browser - အရင် iOS တွေမှာ Internet browser နဲ့ Email တွေကို ဘယ် Browser app နဲ့အမြဲသုံးမယ်ဆိုတာ Setting ပေးထားလို့မရပေမဲ့အခု iOS 14 မှာတော့အဲသည် Setting ပါလာပါပြီ။
ပြီးတော့ Apple Map ကလည်း Routing အတွက် နိုင်ငံတွေ တိုးပြီးထည့်ပေးလာတယ်။ ပြီးတော့ cycling mode ကနေလည်း Bike routes တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်။ Electric car ပိုင်ရှင်တွေအတွက် EV Routing mode ကနေလည်း ကားကို Charging သွင်းလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
iOS 14 ရဲ့ Feature တစ်ခုအနေနဲ့ iPhone ကို ကားသော့အနေနဲ့ပါအသုံးပြုလို့ရလာတော့ပါမယ်ဆိုတာကို BMW M5 2021 နဲ့လည်းစမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။
👉iPadOS 14 ကလည်း Widgets တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး iOS 14 ရဲ့ Widgets Features တွေ Customization အတိုင်းပဲလုပ်ပေးထားတယ်။ Siri ကလည်း Screen တစ်ခုလုံးနေရာမယူတော့ဘဲ ထောင့်တစ်နေရာကပ်သွားတယ်။ Phone call တွေလည်း Screen တစ်ခုလုံးနေရာမယူတော့ပဲ Notification တစ်ခုအနေနဲ့ပဲနေရာယူတော့တာကိုတွေ့ရတယ်။
Search bar ကိုလည်း Size နည်းနည်းသေးအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။
ပြီးတော့ Apple pencil သုံးတဲ့သူတွေအတွက် Scribble ဆိုတဲ့ Feature တစ်ခုက အသစ်အဆန်းပါလာတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် စာရိုက်လို့ရတဲ့နေရာမှန်သမျှမှာ စာရိုက်စရာမလိုပဲနဲ့ Apple pencil နဲ့စာရေးလိုက်တာနဲ့ ရေးလိုက်တဲ့စာကို Text အဖြစ်ပြန်ပြောင်းပြီး ဖြည့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ OCR (Optical Character Recognition) က တော်တော်လေးကိုကောင်းလာတယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့။
👉Airpods Features တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး iOS 14 တို့ iPadOS 14 တို့မှာတစ်ခုထူးထူးဆန်းဆန်းထည့်ပေးလာတာက Airpods ကို ကိုယ်သုံးနေတဲ့ iDevice တွေနဲ့ပဲချိတ်ပေးသွားတဲ့ Features ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကိုယ်က iPhone မှာသီချင်းနားထောင်နေရင်းနဲ့ သီချင်းနားမထောင်တော့ပဲ iPad မှာ Video ကြည့်မယ်ဆိုပြီး iPad ကိုကိုင်လိုက်တာနဲ့ Airpods က iPad ကို အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
👉ကိုယ့်ရဲ့ Watch face တွေကို တခြားသူတွေကိုလည်း Message တွေ Social media တွေကနေတစ်ဆင့် Share လုပ်လို့ရတဲ့ Watch Face sharing ကိုလည်းအခုလာမယ့် Apple WatchOS7မှာထည့်ပေးထားတယ်။ အခု 2020 Covid ကာလမှာစက္ကန့် (၂၀) လက်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက် လက်ဆေးတာနဲ့ နာရီကနေအလိုအလျောက်သိပြီး စက္ကန့် (၂၀)ထိရေတွက်ပေးတဲ့ Automatic Hand Washing Detection ကိုလည်း Feature တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်။ တခြား Smart Watch တွေမှာမပါတဲ့ Sleep Tracking ဆိုတဲ့ Feature ကိုလည်းထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။
👉iOS 14 ပြီးရင်ဒုတိယအသားပေးကြေညာသွားတာကတော့ MacOS 11 ဖြစ်လာမယ့် MacOS big sur ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Big sur မှာတော့ User Interface နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော်တော်လေးကို Improvement လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ ပိုပြီး Rounded လုပ်ထားတဲ့ corners တွေ icon တွေအပြင် Windows တိုင်းလိုလိုမှာ Transparency Effects တွေထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ Quick Setting နဲ့ Notification center ကိုလည်းထည့်ပေးထားသေးတယ်။
👉Surprise ဖြစ်စရာအနေနဲ့ WWDC 2020 မှာ Apple ရဲ့ Hardware ပိုင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးကြေညာခဲ့တာလည်းရှိပါသေးတယ်။ အဲတာကတော့ Apple Mac တွေမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ CPU ကို Intel CPU ကိုသုံးထားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Apple ရဲ့ကိုယ်ပိုင် CPU ကိုပဲသုံးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ ပြီးတော့ Apple CPU ကိုသုံးတဲ့ Mac တွေကိုလည်း အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာတော့ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်ကိုလာရောက်ဝယ်ယူချင်ဆိုရင် ယူနစ် ဆိုင်ခွဲ 🏛လိပ်စာများကတော့ ~
ဖုန်း - (၀၉) ၈၉ ၁၀၀၀ ၁၀၀၊ (၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၁၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၁၀၀
ဖုန်း - (၀၉) ၈၉ ၁၀၀၀ ၂၀၀၊ (၀၉) ၄၀ ၁၀၀၀ ၂၀၀၊ (၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၂၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၂၀၀
ဖုန်း - (၀၉) ၈၉ ၁၀၀၀ ၃၀၀၊ (၀၉) ၄၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀၊ (၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၃၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၃၀၀၊
ဖုန်း - (၀၉) ၈၉ ၁၀၀၀ ၄၀၀၊ (၀၉) ၄၀ ၁၀၀၀ ၄၀၀၊ (၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၄၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၄၀၀၊
ဖုန်း - (၀၉) ၈၉ ၁၀၀၀ ၅၀၀၊ (၀၉) ၄၀ ၁၀၀၀ ၅၀၀၊ (၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၅၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၅၀၀၊
ဖုန်း - (၀၉) ၈၉ ၁၀၀၀ ၆၀၀၊ (၀၉) ၄၀ ၁၀၀၀ ၆၀၀၊ (၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၆၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၆၀၀၊
ဖုန်း - (၀၉) ၈၉ ၁၀၀၀ ၇၀၀၊ (၀၉) ၄၀ ၁၀၀၀ ၇၀၀၊ (၀၉) ၄၅၅ ၂၀ ၉၇၀၀၊ (၀၉) ၉၆၄ ၂၀ ၉၇၀၀၊
အမှတ်(၁၁)၊ ၇၈လမ်း၊ ၃၃ x ၃၄ ကြား၊
အမှတ်(၃၀)၊ ၆၂ လမ်း၊
ဂေါ်သဇင် နှင့် ခိုင်ရွှေဝါ ကြား၊
ဖုန်း - (၀၉) ၈၉ ၂၀၀၀ ၂၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
ယူနစ်ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်အခါတွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆိုင်ခွဲ (၇) ဆိုင်၊ မန္တလေးမြို့တွင် ဆိုင်ခွဲ (၂) ဆိုင် စုစုပေါင်း ဆိုင်ခွဲ (၉) ဆိုင်တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံး၊ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနှင့် ဒီဂျီတယ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအစုံလင်ဆုံး ကွင်းဆက်လက်လီဆိုင်များအဖြစ် ရပ်တည်နေပါသည်။